Umbono omangalisayo waseRio Vermelho - I-Airbnb
Umbono omangalisayo waseRio Vermelho
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArthur
Wamkelekile kwiflethi yakho ekwi-Red River!! Yenye yezona ndawo zintle eSalvador kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona ndawo ihamba phambili kwesi sixeko, ummelwane umbhali uJorge Amado wakhetha ukuhlala kuyo, wayengenakuba nenye indawo: ulwandle, ilanga, ubugcisa, inkcubeko kunye ne-bohemian. Ukubona ngokupheleleyo ukusuka ebhalikhoni kuvela kwi-Patio Beach, umphambili wolwandle. Le ndlu yeyakho! Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuze ukuhlala kwakho kungalibaleki! Ngaphambi kokuba ufike, uza kufumana iphasiwedi enamanani akhethekileyo kwindawo yokutshixa yedijithali.
Ipuli yabantu abadala, ipuli yokuqubha yabantwana, indawo yokujima enezixhobo ezipheleleyo ze-airobic, ulwandle olupheleleyo. Indawo yokudlala yabantwana bobudala bonke, i-basketball/inkundla ye-futsal.. phawula : ipuli ayisebenzi ngoMvulo, ngoko indawo icocwa. Iphuli ineeparasols, iitafile nezitulo ezilungele ipuli yokuqubha. Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex nakwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke zesakhiwo. Omabini amagumbi eflethi anomoya.
Iindawo ezikufutshane ezaliswe ziibhari neevenkile zokutyela zazo zonke iincasa, kunye nobuso baseSalvador, kufutshane nayo yonke into eyenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi kwaye kungalibaleki!
Ndiza kube ndikhona xa ndicelwa, enoba ngokobuqu okanye ngefowuni, kuquka amacebiso avela kwiibhari, kwiivenkile zokutyela, kwiindawo zokonwaba ebusuku okanye kwiindawo eziphawulekayo. Ungonqeni ukuqhakamshelana nam.